Wasaaradda Caafimaadka ee Shaqaalaysiinta Shaqaalaha Qandaraaska 8844 | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Caafimaadka inay shaqaalaysiiso shaqaale gaaraya 8844 qandaraasle
12 / 02 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
Wasaaradda Caafimaadka oo qaadanaysa shaqaale qandaraas leh
Sida ku xusan natiijooyinka Imtixaanka xulashada Shaqaalaha Shaqaalaha (KPSS) ee lagu shaqaaleysiin doono waaxyada adeegga ee heer gobol ee Wasaaradda Caafimaadka iyadoo la raacayo faqradda (B) ee Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Qodobka 4 iyo Qodobka 663 / A ee Xeerka Sharciga lambarka 45, waxbarashada dugsiga sare, waxbarashada hore, Wadarta 8.844 shaqaale qandaraas la shaqeeya ayaa laga shaqaaleysiin doonaa heerarka shahaadada koowaad iyo jaamacadeed.
Hagaha Kala doorashada ee KPSS-2020/4, oo ay kujiraan jagooyin shaqaale caafimaad oo qandaraas la siiyay oo laga doorbidi karo heerka dugsiga sare, iskaashatada iyo heerka shahaadada koowaad, ayaa lagu daabici doonaa websaydhka ÖSYM.
2018-KPSS Undergraduate, 2018-KPSS Secondary Education and 2018-KPSS natiijooyinka Imtixaanka Shahaadiga ah waxaa loo isticmaali doonaa jagooyinka heerarka heerka koowaad ee nidaamka xulashada.
Murashaxiinta waxay awood u yeelan karaan inay sameyaan xulashooyinkooda inta u dhexeysa 14-20 Feebarwari 2020 iyagoo galaya lambarka Aqoonsiga TR iyo lambarka sirta ah ee bogga "YSYM" iyadoo la raacayo qawaaniinta lagu qeexay hagida doorashada. Liisaska xulashada ee boostada laguugu diro ama loo diro ÖSYM ama Wasaaradda Caafimaadka ma shaqeyn doonto.
Murashaxiinta doonaya in ay doortaan jagooyinka Cilmiga maqalka, Joogtada, Hadalka iyo Luqadda Dhakhtarka iyo Caafimaadka Fiisigiska oo leh shahaadada qalin-jabinta ee barnaamijyada la xiriira (KALIYA INUU BARNAAMIJKA MAAMULKA ama DHAQAALADA DHAQANKA) illaa 18:2020 ee Febraayo 17.00, 6, Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada - Shaqada Guud. Agaasimuhu waa inuu ku dabaqaa Dhismaha Adeeg Dheeri ah (GMK Bulvarı Maya: 2 Dabaq: XNUMX Kızılay / ANKARA) shaqsi ahaan.
Musharaxiinta aan shaqsiyan dalban karin; Nuqulka Nootaayo ee Kaarka Aqoonsiga Turkiga / Kaarka Aqoonsiga oo leh codsi iyo koobi nootaayo ah oo ah shahaadada / shahaadada qalinjabinta heerka Master / Doctorate (ama koobi ah go'aanka 'YÖK' oo loo qaatay magac dheeri ah, haddii loo baahdo) jaamacadda Qoyska. Waxay awood u yeelan doonaan inay ku soo diraan cinwaanka rasmiga ah ee Wasaaradda Shaqada iyo Adeegyada Bulshada - Agaasinka Guud ee Shaqaalaha (Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada - Agaasinka Guud ee Shaqada Emek Mh. 17. Cd. No: 13 Çankaya / ANKARA) boostada diiwaangashan. Codsiyada aan soo gaadhin hay'adda ilaa iyo Febraayo 18, 2020 lama socodsiin doono.
Murashaxiinta sameyn doona xulasho aan ka aheyn jagooyin ay ka mid yihiin maqal-yaqaannada, Qalliin-yaqaannada, Hadalka iyo Luqadda Daaweynta iyo Fiisikiska Caafimaadka, kuwaas oo ka qalin-jabiyey shahaadada labaad ama shahaadada jaamacadda, wax codsi ah kuma sameyn doonaan Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Agaasinka Adeegyada Guud ee Bulshada.
Murashaxiinta ka qalin jabiyay ama ka qalin jabiyay arjiga iyagoo wata codsiyada Madaxtinimada Shaqaalaha Dawlad la Idbey uma baahna inay dib u dalbadaan.
Taliska guud ee Gendarmerie si loo sameeyo shaqaale qandaraas leh
Jaamacadda Kütahya ee Sayniska Caafimaadka waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
TULOMSAS 30 waxay samayn doontaa qorista shaqaalaha qandaraaska ah